रोल्पामा बस दुर्घटना, २ को मृत्यु २५ घाइते, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रोल्पामा बस दुर्घटना, २ को मृत्यु २५ घाइते
रोल्पा । रोल्पामा सोमबार साँझ बस दुर्घटना भएको छ । जिल्लाको लुङ्ग्री गाउँपालिका–३, जुतुङखोलामा बा १ ख ५५२१ को नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिका–५ सारी प्यूठानका २४ वर्षीय चालक नवराज आले र लुङ्ग्री गाउँपालिका–३, जुतुङखोलाका ११ महिने बालक नितेश विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुलिचौरबाट सिर्पका लागि छुटेको आशीर्वाद यातायात प्रालिको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका असई शेरबहादुर थापाले डीसीनेपाललाई जानकारी दिए ।
उनले घटामा घाइते भएकाहरुको बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेज र रोल्पाको सुलीचौर प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १० जना घाइतेको उपचार कोहलपुरमा भइरहेको छ भने १५ जनाको सुलीचौरमा उपचार भइरहेको छ ।
बसमा ३० जना यात्रु रहेका थिए । अन्य ३ जना भने शकुसल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।